ရေးချင်လွန်းသဖြင့် ( ဒုတိယပိုင်း ဇါတ်သိမ်း ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ရေးချင်လွန်းသဖြင့် ( ဒုတိယပိုင်း ဇါတ်သိမ်း )
ရေးချင်လွန်းသဖြင့် ( ဒုတိယပိုင်း ဇါတ်သိမ်း )
Posted by မောင် ပေ on Jun 21, 2011 in My Dear Diary | 19 comments
ယခင် က အသိမိတ်ဆွေ အိမ်ထောင်ရှင်များ ။ အသိများ ထဲ မှ အန်ကယ်ကြီးများ ။ အကိုကြီးများ တော်တော်များများ သည် စနေ တနင်္ဂနွေ ည များ တွင် ဘောလုံး ပွဲ ကို အပြင်မှာ ညအိပ် ကြည့် ကြသည် ဟု ဆိုသည် ။ သူတို့ အိမ်ထောင်ရှင် မ များက မောင်ပေ့ ကို တွေ့ တိုင်း မေးကြသည် ။ ` ဟဲ့ နင့်အကို ၊ နင့် အန်ကယ် နဲ့ မနေ့ ညက ဘောလုံးပွဲ အတူ ကြည့်တာဆို ´ ။ မောင်ပေ ဘာမှန်း မသိခဲ့ပါ ။
အင်းဗျာ … ရေးမယ်ဗျာ ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖော် မသူတော် လို့ ပြောလည်း အပြောခံ ပြီ ဗျာ ။
အခန်း ထဲ တွင် ဟိုပွတ် ဒီပွတ် ခံ နေသော မောင်ပေ သည် စိတ်အာရုံ ပြောင်းစေရန် အလို့ ငှာ ကောင်မလေး ကို အင်တာဗျူး နေမိသည် ။
` အခု လို နှိပ်တော့ တစ်ဆက်ရှင် ကို ဘယ်လောက် လဲ ´ …။
… ` ၁၀၀၀၀ ပါ အကို ´ …။
… ` နင်တို့ က ဘယ်လောက် ရသလဲ ´ ….။
…. ဆီနှိပ်ရင် တစ်ဆက်ရှင် ကို ၂၀၀၀ ရတယ် ။ ရိုးရိုး ကတော့ ၁၀၀၀ ပဲ ရတယ်။ ညီမ တို့ လို လုပ်သက်ရလာတဲ့ သူတွေ ကြ ရိုးရိုး ကို ၁၅၀၀ ရတယ် ´ ။
` စားတော့ကော ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် စားရတာလား ´ ..။
.. ` ဒီက ကျွေးတာပေါ့ ´ …..။
…. ` သြော်..သြော် အဖမ်းအဆီး တို့ ဘာတို့ ကော မလာဘူး လား ´ …။
…. ` လာတာပေါ့ အကို ရဲ့ ။ အဲဒီလို အချိန် မျိုးကြ ရင် ညီမ တို့ ကို ဒီကနေ ခဏ ရှောင်ခိုင်းထားတယ် ။ အခြေအနေ ပြန်ကောင်းသွားမှ ပြန်လာကြတယ် ´ ….။
….. ` အေးပေါ့ ။ အဲဒီလို လဲ ရှိဦးမှပေါ့ ။ နင် တို့ လို့ မိသားစု ကို လုပ်ကျွေးနေတဲ့ သူတွေ ကြတော့ လဲ…. အင်း ဒီအလုပ် က ဝင်ငွေ ကောင်းမှာပါ ။
´ ကောင်မလေး က ကျွန်တော့် ပေါင်တွေ ကို နှိုက် ပွတ် နေရင်း ကျွန်တော့် ကို ပြုံးစိ ပြုံးစိ နှင့် ကြည့်နေသည် ။
` ဟဲ့ ငါ က ချော လို့ လား ´ ဟု ဟာသ လုပ် လိုက်တော့ ၊
` အကို ဆက်ရှင် က နာရီဝက် ရှိပြီ ။ အကို အကြောလျှော့ ပေးရမလား ´ ..။
.. ဒါနဲ့အခု အကြောလျှော့ ပေးနေတာ မဟုတ်ဘူးလား ဟု မေးလိုက်တော့ ။
ရှယ်အကြောလျှော့ချင်လျှင် သပ်သပ် ၅၀၀၀ ကျပ် ထပ်ပေးရမည် ဟု သူမ က ဆိုလာသည် ။ ဒါနဲ့ သူမ လို မိသားစု ကို လုပ်ကိုင်ကျွေးမွေးနေသူလေး ကို အားပေးချင်တာက တစ်ကြောင်း အကြောလျှော့ တာ ဘာများပါလိမ့် ဆိုတာ သိချင်တာက တစ်ကြောင်း ။ လျှော့ ကွာ ဟု ပြောလိုက်သော အခါ ။ သူမ သည် ကျွန်တော့် သဘက် ကို ဆွဲဖယ်လိုက်သည် ။ ပြီးနောက် ဇွတ်ကနဲ ဇက်ကနဲ နဲ့။ ငြင်းချိန် တားချိန် မရလိုက်တော့ ။ ( မီးဖိုချောင် ထဲ မှာ သခွားသီး ကို ရေပွတ်ဆေး နေသော ကောင်မလေး တစ်ယောက် ကို မြင်ကြည့်ပါ ခင်ဗျာ ဟီဟိ ) ……….
` အို ။ အလို ။ ဟင် ´
သို့ နောက် သို့ နောက် သူမ ပြောသလို အကြောပြေသွားပါသည် ။ ( ဤနေရာတွင် ရိုင်းသလို ရှိသော် ခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါ ) ပြီးတော့လဲ ပြီးတာပေါ့ ဗျာ ။ တစ်ကိုယ်လုံး လည်း သံလွင်ဆီ တွေ နှင့် ။ ရေချိုးခန်း ထဲ ဝင် ရေချိုးလိုက်ရသည် ။ ကောင်မလေး က လိုက်လာသေးသဖြင့် အခန်းတံခါး ပိတ်လိုက်ရသည် ။
သို့ နှင့် ဆရာသမား နဲ့ ကျွန်တော် နဲ့ ပြန်လာခဲ့ကြတာပေါ့နော် ။ ဆရာ သမား က လမ်းမှာမေးတယ် ။ မင်း မနေ့ က ငါ့ ကို တကာခံ တဲ့ ဟာ နဲ့ ငါအခု မင်း ကို တကာခံ တဲ့ ဟာ နဲ့ ဘယ်ဟာ ပို ကောင်း လဲ….တဲ့ ။ ကျွန်တော် ဘာမှ မဖြေလိုက်ပါ ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ယခု ကျွန်တော် ရေးသားနေသော ပို့ စ် အတွက် စဉ်းစား နေမိသောကြောင့် ။
ကဲပြီးပါပြီ ။ ရိုင်းသလိုလို ရှိခဲ့ပါက ဖတ်မိသည့် ညီငယ် ညီမငယ် ။ အကို အမ ။ အန်တီ အန်ကယ် တို့ ခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါ ခင်ဗျား ။ ဒီလို နေရာ တွေ မှာ ဒီလို ရှိတယ် ဆိုတာလေး အသိပေး လိုသည့် ရည်ရွယ်ချက် ဖြင့် ရေးသားတင်ဆက်လိုက်ပါကြောင်း ။ အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။
သြော်… ၀ံကိုက်နာကုပေးတာ ၅၀၀၀တောင်ပေးလိုက်ရတာကိုး..။
ပိုစ့် တစ်ခုလုံးမှာ သဘောကျစရာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ “ ` ဟဲ့ ငါ က ချော လို့ လား ´ ဆိုတာလေးကိုပါ။:D :D :D :D
ဖတ်လိုက်တာ ညောင်းသွားပြီ။ အနှိပ်ခန်းသွား အကြောသွားလျှော့အုံးမှပဲ။ လိုက်ကြည့်ရဘူးနာ်။
အမငီး ပိုက်ဆံရှာချက်နော်…. တစ်ဆက်ရှင် တစ်သောင်းကို ပိုင်ရှင်က ၈၀၀၀၊ အလုပ်သမားက ၂၀၀၀ + extra. တစ်နေ့ကို လူ ဘယ်လောက်ဝင်သလဲ လိုက်ချောင်းချင်လိုက်တာနော်…..
ရေးလဲရေးတတ်ပ သွားချင်စိတ်ကိုချက်ချင်းဖြစ်သားပီ။ :D :D :D
သူတို့ သူတို့ တတွေရဲ့
Save site for Health (Prevention and Treat) ကို ဘာတွေလုပ်ထားကြလဲ။
ပပြောက်ဘို့တော့ စဉ်းစားလို့ ရနိုင်မယ်မထင်ပါ။
ဘယ်သူ့အပြစ်စကားဆိုရပါ့……….. လူဖြစ်လာတဲ့နေရာက KTV မရှိ မာစွတ်ဆိုလား မာဆတ်ဆိုလားမရှိ အနှပ်ခန်းမရှိနဲ့ သူများပြောတာ သွားရည်ကျနေယုံသာ အမေငီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပင်သနားလိုက်ချည်ရဲ့လေးးးးးးးးးးးး
အိမ်နားကပ်လျှက်မှာ KTV ဆိုင်ကြီးနှစ်ဆိုင်ရှိတယ်။ တစ်ခါမှတော့ သွားပြီး အကြောသွားမလျှော့ဖူးဘူး။ ဒီည နေအဖေါ်ခေါ်ပြီးသွားလိုက်ဦးမယ်။ တူနှယ်……တဲ့နှယ်။
တဆက်ရှင်ကို 5000 တောင်တက်သွားပြီနော်…
မုန့် ဆီကြော် ဘယ်ဆီ မေးခြင်း သည်းခံလော့ မိတ်ဆွေ ။
လက်တွေ့ လာမှ ထူးခြားမှု ကို လက်တွေ့ သိရမည် ။
ဟွန့် .. ခေါ်တော့ဝူး .. အနော့ ကျ လိုက်မပို့ ပေးဘူး … ဂါး ….
သူနှိပ်တာကိုခံရတာဆိုတော တန်ဒယ် တန်ဒယ်
သူနှိပ်ဒါကို ဘယ်လိုမှ စိတ်တိုင်းမကျလို့
ကျုပ်ကိုယ်ဒိုင် အားနဲ့မာန်နဲ့ သူ့ဂို အပီနှိပ်ဘလိုက်ခဲ့ရဒယ်
မှတ်ချက်။ ။ အသေးစိတ် မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်းသီးခံပါ။
စိတ်ကြီးပုံ က9လောက်ရှိရှိ
5000 တန်က ရိုးရိုး
10000 တန်က အေးကွန်းလေးနဲ့
ပြီးတော့ စနိုးတာဝါလေးက ပါသေး
မန်းလေးမှာ ကွက်ပျောက် ကွက်ပေါ်တောတောပေါတယ်
အန်ပေါင်းရတုန်းလေး သွားချင်လိုက်တာ :D
ဘာဘဲလုပ်လုပ် အဲဒီမှာလဲ Marketing ဝင်ဖို့ မမေ့နဲ့။ ;-)